Hery - Tsiky dia ampy | ItaliAfrika |
2012-01-27 @ 07:31 in Izaho sy ny ahy, ItaliAfrika
Angamba tsy eto Italia ihany no krizy amin'izao fotoana izao... fa ny eto kosa dia efa tsy rariny mihisy. Taorian'ny nanesorana an'i Berlusconi (tsy tamin'ny coup d'état fa hitany hoe tsy nanana majorité intsony izy dia niala), dia niditra teo amin'ny fitantanana ny governemanta i Mario Monti. Governemanta teknisianina avokoa (tsisy an'ireny sipasipa kely 30 taona tahaka ny tamin'i Berlusk ireny ) Dia anisan'ny vahaolana narosony ho an'ny krizy ny libéralisation...
Raha ny tokony ho izy izany dia tokony tsy hidina be intsony ny faripiainana.
Amin'izao anefa dia tsy faly amin'ilay libéralisation ny olona izay mitantana ny harena, toy ny mpivarotra, ny mpitatitra, ny mpitantana ny solika sns... dia migrevy indray. Dia mihitsoka tanteraka. Miditra any an-tsena any amin'ny supermarché dia betsaka ny toerana foana, tsy misy entana satria migrevy ny fiarabe mpitatitra entana. Mitombo ny vidin'ny solika satria tsisy mpitatitra solika. Misondrotra ny vidin-tsakafo eny antsena, nitombo avo roa heny ohatra ny vidin'ny legumes.
Ary androany dia nanampy trotraka koa ny fitateram-bahoaka (bus, metro, tram, train) tamin'ny fitokonana 24 ora izay nataony. Izany hoe tsy misy ny fitateram-bahoaka kanefa ny vidin'ny lasantsy niakatra be... vokany tsy miasa ny ankamroan'ny olona.
(Tehiriziko ato ity hovakiana any aoriana)
Tonga soa eto Italiafrika 2
2011-10-21 @ 07:35 in ItaliAfrika
Tsy ity no lahatsoratry ny blaogy tokony hivoaka fa gravy fotsiny ilay nanjo nandritra ny oram-be androany tontolo andro iny (nb. Omaly) ka dia aleo mitantara kely.
Efa elaela aho tsy niresaka firy intsony ny momba an'Italiafrika. Tsy hoe nikisaka akory ilay kontinanta, na hoe nivoatra... Fa vao maika aza nitotongana. Ny Afrikana sasany aza moa nandritra ireny fihetsehan'ny tany Arabo ireny dia tsy nety nialokaloka teto Italiafrika. Naleony nitady lalana tany Eoropa. I Rachid izao efa tafita ao Marseille ao... efa tsy nihambo ho Afrikana intsony.
Tsy any no tena resaka fa fiarahabana an'ireo Malagasy namana maromaro izay tonga handranto fianarana eto Italiafrika. Hoy aho hoe tonga soa. Mino aho fa tsy hanana olana firy ianareo satria tsy dia samihafa firy amin'ny any Afrika ny eto. Ny vazaha fotsiny no maro an'isa amin'ny mponina.
Na izany aza dia misy zavatra vitsivitsy mety hahaliana anareo momba ny toetran'ny Italiana.
- Toa ny any Afrika, ny Italiana dia be resaka. Mitabataba eny ambony bus sy train. Milelalela amin'ny tele sns. Efa ao anatin'ny rany io ka tsy azo esorina. Misy lafiny tsara anefa io indrindra rehefa tsy mbola mahay teny italiana tsara. Mba miitabataba tahaka azy koa. Aza matahotra hoe tsy ho azony fa ny fihetsiky ny tanana fotsiny no ataovy betsaka. Na ry zareo koa aza tsy mifankahazo raha tsy mampiasa tanana.
Ny Italiana amin'izao tena lasa mpanavakavaka be. Indrindra hatramin'ny nisian'ny krizy. Ny antony dia toy ny any Afrika, lasa niha nahantra ka lasa samy maka ho azy. Raha mba miasa ianao dia mimenomenona izy hoe mangalatra ny asa tokony ho azy nefa izy amin'io kamo tsy hahavita ilay asa akory
Aza gaga raha toa feno fako eny an-dalana. Misy mpiasan'ny voiries koa aty ary tena be karama fa aleon'ny commune tsy mampditra mpiasa intsony mba hampitombo ny karamany.
Aza gaga rehefa misisika be sy anki-tolona ny miditra anaty bus sy train. Tsy ampy, toa ny any Afrika koa ny fitaterana eto. Ary izay kely mandeha dia efa tonta be sy maloto.
Ary aza gaga raha misy ireny toy ny androanyy ireny. Rano be hatreny an-poto-pe kanefa orana tsy ampy adin'ny efatra. Ny antoko ankavanana no mitantana an'i Roma amin'izao. Tsy misy fijerena ny madinika izany. Nisy vola 2 millions d'euros nomena ny comune hanamboarana indrindra ny tatatra sy ny fivoahan-drano rehhetra. Mbola safo-drano ihany Roma. Ny paosiny no notsetsemany.
Betsaka ny zavatra mbola ho hitanareo eto mitovy tanteraka amin'ny any Afrika... ny tombony dia hoe tsy mila mizatra firy intsony fa tonga dia tamana. Dia raha tena te ho any an-dafy dia mba mivoaha kely an'i Italie.
Ito ambany ny video sendra nalaiko omaly
Toa izao kosa ny video sasany
Surprise, un don de 120 Euros
2011-04-08 @ 14:55 in Izaho sy ny ahy, ItaliAfrika
Ce n'es pas une blague... Je viens de recevoir 120 euros de telecom Italia... Et je suis content... Miala tsiny fa teny gasigasy ny tohiny fa natao hisintomana kil fotsiny ilay mody natao teny frantsay eo ambony... litera 140 mandeha any amin'ny twitter sy facebook.
Fa tena marina. Nahazo verim-bola 120 euros tamin'ny telecom Italia aho. Aza miteny hoe izay vola kely izany ve, satria sarotra dia sarotra vao mahazo vola kely amin'ireo entreprises italiana ireo. Ny mifanohitra amin'izany aza mantsy no mateti-pitranga. Tamin'ny herintaona, ohatra, dia nandritra ny herintaona aho mbola nahazo faktioran'ny ligne telefonina tsy nampiasaiko akory na 1 segondra aza. Nefa isam-bolana dia tonga hatrany ilay faktiora. Ny ligne ampiasaiko amin'io efa fournisseur hafa mihitsy. Tato ho ato aho vao tsy nahare tohiny intsony fa angamba tonga saina, na reraka, na humm.
Ka ahoana ary ny momba ity 120 euros ity. Nanomboka tamin'ny faran'ny janoary teo dia tapatapaka ny internet tao antrano. Ny telefona mandeha tsara fa juste ny internet. Dia isaky ny tapaka dia miantso ny support avy hatrany aho. Dia amboarindry zareo ao anatin'ny 48 heures... dia avy eo tapaka indray dia toa izany foana. Misy fotoana izany rehefa tsy tapaka izy dia miari-tory bebe kokoa aho mba hahafahana manao zavatra dia rehefa tapaka izy dia matory aloha. Fa tsy tapaka mihitsy aho ny miantso ny support isaky ny tapaka. Farany dia niantso ny support commercial telecom aho nametraka fitarainana... notehiriziny tany ny fitarainana fa omaly kosa izy vao niantso dia nilaza fa averiny ny 120 euros.
Tsy mahasolo ny ora very isaky ny tsy misy internet io... fa mahafaly rehefa mba manao toa izany ny Telecom.
2009-07-17 @ 08:01 in ItaliAfrika
Tsy hoe mirehareha amin'ny taingim-be any Madagasikara akory fa rehefa samy hifanesika ihany dia aleoko indray ilay mikiraviravy amin'ny bus toa izay tahaka ny omby ohatr'itony aty Italiafrika itony. Ny nahatonga ity gidragidra ity dia satria nofoanandry zareo ny train anakiroa teo aloha (noho ny toetr'andro hono) dia voatery misisika toa izao ny olona.
Ny fofona amin'io an grrr :-)
Italia: Sahobakaka ambodiriana
2008-05-27 @ 08:48 in ItaliAfrika
Anisan'ny fomba fiteny malagasy ilay hoe manao sahobakaka ambodiriana (ny tohiny dia be dia be :-)). Ny sahobakaka ambodiriana dia ireny sahobakaka miezaka mitsambikina hihoatra riana ireny kanefa tsy afaka. Ny eritreritra be dia be fa ny hoza-pe no tsy maharaka. (tohiny)
Ny Italiana sy ny Eoropeana
2008-04-24 @ 18:20 in ItaliAfrika
Ity sarimihetsika kely ity dia namboarin'i Bruno Bozzetto izay Italiana. Mampiseho ny mahasamihafa ny Italiana amin'ny Eoropeana hafa... na ny marimarina kokoa, ny mampitovy ny Italiana amin'ny Afrikana :-)
2008-02-22 @ 12:29 in Izaho sy ny ahy, ItaliAfrika
Mbola tsy tonga ny lohataona (printemps, primavera) aty Italie kanefa efa manomboka miposaka sahady ny masoandro... nangina ny tontolo nandritra ny fotoana vitsivitsin'ny ririnina... dia nangina koa ny blaogiko. Nifoha kely izy izao... fa nisy masoandro kely indrindra vokatry ny tel voaray vao teo. (tohiny)
Governora mpandika lalÃ na eto ItaliAfrika
2007-09-21 @ 07:58 in ItaliAfrika
Vaovao nanaitra indray ity nitranga omaly ity. Governoran'i Liguria izay sady minisitry ny fitaterana teo aloha no efa solombavam-bahoaka ihany koa. Atoa. Burlando dia nandeha tamin'ny zotra mifanohitra amin'ny tokony ho izy tamin'ny lalambe Autoroute. Ilay antsoina foana hoe "à contre sens" amin'ny teny frantsay na "contromano" amin'ny teny Italiana. Efa maherin'ny 1 km izy no nanao izany, nifanena tamin'ny fiara vitsivitsy, vao nijanona. Soa ihany fa tsy niteraka loza. Ireo fiara izay nifanena taminy moa dia niantso ny polisy avy hatrany. Nony tonga anefa ny polisy dia nasehony ny karatra maha solombavam-bahoaka azy, karatra efa lany daty, dia navelan'ny polisy nandeha fotsiny izy.
Ny eto Italia, amin'ny maha firenena Afrikana azy, dia mbola manaja tsara ireny filoha na mpitondra na solombavam-bahoaka taloha ireny. Firifiry tokoa moa ny mpitondra taloha aty amin'ny tany afrikana no miliba fotsiny na dia be aza ny zavatra tsy nety nataony sy nanenjehana azy nandritra ny fotoana nitondrany. Fitandroana ny "Fihavanana" daholo izany.
2007-06-27 @ 09:06 in ItaliAfrika
Efa nolazaiko ihany tatsy aloha tatsy ny fahitako an'i Venise, tananam-pitiavana. Aiza tokoa re ny tananam-pitiavana any Dago... Anjely Mainty eny Anosy? Eny Ambatofotsy? Eny Imeritsiatosika? Eny Ambohijanahary? Eny Tsimbazaza? Ireo aloha no tadidiko fampiarahan'ny olona taloha. (tohiny)